I-24 Best Chest Tattoo Design Design for Men and Women - Tattoos Art Ideas
I-24 Best Chest Tattoo Design Idea Kwabesilisa nabesifazane
i-sonitattoo July 12, 2016
Uma unama-tattoo aficionados kanye nezilutha, kunezinkulungwane zezinhlaka zesifuba ongafuna ukuzihlobanisa nazo.
Ukusetshenziswa kwamathambo we-#chest kube yilokho esikubonayo kwezinye izilonda ngenxa yomphumela onesibindi nesimanga emzimbeni. umthombo wesithombe
Lawa ma-tattoos angaba amahle, asabise, amangale, akhuthaze futhi abuye ahlasele. Konke kuxhomeke kulokho ofuna ukukufeza ngemuva komdwebo wakho. umthombo wesithombe
Amathrekhi e-Chest avuliwe. I-#designs ingaba yindawo yamattoo enhle kakhulu ongayithola noma kuphi emhlabeni. umthombo wesithombe
Ungase ufune ukwazi ukuthi isifuba siphila uma kuziwa ekudwebeni i-tattoo. La madoda angasho ukuthi isifuba sisuka endaweni eseduze nentamo, sikhuluma ngama-clavicles kuya emisipha ye-pectoral. Yilokho amadoda angawachaza njengesifuba sabo. umthombo wesithombe
Abesifazane bangasho ukuthi izindawo zebele azibandakanyi esifubeni sabo. Lokhu akusho ukuthi ngeke ukwazi ukudweba ngalezi zindawo. umthombo wesithombe
Uma kuziwa emiklamo yobuciko besikhumba, akukho lutho olungeke luhambe. Kufanele wazi ukuthi enye yezinkolelo ezingalungile ezenzeka uma ukhuluma ngamathambo we-esifubeni ukuthi umdwebo awubuhlungu. umthombo wesithombe
Isizathu abacabanga ngalo mkhakha wukuthi bayakholelwa ngephutha ukuthi isifunda se-pectorals emadodeni nasezindaweni zesifuba kubesifazane yilapho izifuba zitholakala khona. umthombo wesithombe
Sizokukhuluma ukuthi i-bony ehle ingasho ukuthi iyingxenye yesifuba. Ngaphambi kokuba ukhethe isifuba sakho, zama futhi uqinisekise ukuthi ukhetha ukuklama okuzobe kuphelele nama-protuberance atholakala esifubeni kanye nemigodi yemvelo. umthombo wesithombe
Ungakhathazeki ngemidwebo e-intanethi. Ngokumangazayo, lawo mathupha esifubeni aboniswa kwi-intanethi azohluka kakhulu emzimbeni wakho. umthombo wesithombe
Ama-tattoos esifubeni ayekhona ngaphambi kwe-20th ikhulu leminyaka. Uma usebenzisa ama-tattoos esifubeni, qiniseka ukuthi unomklamo ophelele ozokutshela indaba yakho. umthombo wesithombe
Iningi labantu abadweba izicubu zesifuba zithi zineklamo enjalo noma incazelo yalowo tattoo ezinhliziyweni zabo. Sizohlale sikutshela ukuthi into engcono kakhulu ongayenza ngaphambi kokuba uhambe umdwebo we-tattoo ukwenza kuqala ucwaningo lwakho. umthombo wesithombe
Ama-Tattoos e-Chest abe yilokho okubonakalayo kuzo zonke izindawo ukuthi kungani sibona ithola izindlela ezahlukene futhi umklamo ubonakala kuphela uma unomdwebi omuhle we-tattoo. Buka lolu hlobo lwe-tattoo esifubeni bese usitshela ukuthi luhle. umthombo wesithombe
I-inking ye-tattoo esifubeni ingafakwa yinoma iyiphi ingxenye yomzimba. Ngezinye izikhathi, sibona ama-tattoos esifubeni abukeka engavamile. Ngenxa yobuhle obuhlukahlukene bokudalwa kwamathambo emhlabeni jikelele. Awuboni i-tattoo yesifuba futhi awunaso ukubukeka kwesibili. umthombo wesithombe
Kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi inyoni ye-tattoo design ibalulekile. Kufanele uthathe isikhathi sethu ekusesheni ngokusebenzisa ikhathalogu ye-intanethi yezinyoni ngaphambi kokuba ukhethe ukukhetha kwakho. Isikhathi sokuqala okumelwe ukwenze ukuthola umculi we-tattoo ozokutshela lokho okukuyo. umthombo wesithombe
Kunezinhlobo ezahlukene zezinyoni; izinyoni ezifuywayo nezilwane zasendle zazo zonke izinhlobo nezinsayizi. Inyoni ngayinye ibaluleke kakhulu ukuthi yisiphi isizathu okufanele siyiqaphele uhlobo lwezinyoni ze-tattoo esizozisebenzisa. Thatha isibonelo, isikhala noma igwavu liye lahlotshaniswa nomlingo omnyama nobuthakathi kuyilapho amajuba amhlophe eyaziwa ukuthi afanekisela ukuthula nokuhlanzeka. umthombo wesithombe
Indlela elula yokuphendula lo mbuzo ukuhlola i-tattoo oyifunayo. I-tattoo yesifuba imelela ubukhosi ezindaweni eziningi. Namuhla, ukujwayela kwamathambo okufuba esifubeni kukhula futhi kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele uthole eyodwa. umthombo wesithombe
Kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi umdwebo womdwebo we-tattoo usukile. Kufanele uthathe isikhathi sethu ekusesheni ngokusebenzisa ikhathalogu ye-inthanethi yamathumba ngaphambi kokuba ukhethe ukukhetha kwakho. umthombo wesithombe
Cabanga, lesi tattoo esifubeni asibheki inselele ukukhiqiza. Ngomsebenzi omuhle wasekhaya lapho ungayithola khona, uqinisekile ukuthi unalolu hlobo. umthombo wesithombe
Umdwebo wesifuba wesilisa ngeke uhambe maduzane. Isifuba somuntu singadonsela ukuhambelana nomuntu futhi ngoba sinezicabha futhi zibanzi, imidwebo eminingi ingenziwa lapha. umthombo wesithombe
Uyakuthanda lokhu? Isikhathi sokuqala okumelwe ukwenze ukuthola umculi we-tattoo ozokutshela lokho okukuyo. umthombo wesithombe
Ngokuthola tattoo kanje, thatha isikhathi bese ubuza imibuzo futhi wazi lapho ufuna omunye onjengalokhu. umthombo wesithombe
Chofoza lapha ukuze uthole ezinye i-Chest Tattoo Designs
imibhangqwana emibhangqwanaizinyawo zamathamboumdwebo womcibisholoizithombe zezinhlangaamathrekhi we-butterflyizithombe zezinyangaama-tattoos engaloimisindo yezintamboama-tattoo kubantuizithombe zezingonyamaimibono ye-tattootattoos cutebird tattoosi-scorpion tattootattoos zomqheleizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyeziabangani bomngane abangcono kakhulungesandla izidakamizwaflower tattoosI-Feather TattooTattoos zeJomethrikhii-henna tattookoi fish tattooamathumbu esifubaama-sun tattoosidayimani tattooumculo womdweboumdwebo wezindlovuama-Tattoos amantombazaneangel tattoostattoos udadei-cherry ehlobisa i-tattooukubuyisa izithombelotus flower tattootattoo isodesign mehnditattoo engaphelii-octopus tattoorose tattoosama-tattooumdwebo we-watercolorTattoos yama-Ankleama-tattoo amahangeI-Heart Tattoosuthando izithombei-compass tattooama-cat tattoosimidwebo yamasleetattoos eagleukudubula izithombe